Ọhụrụ nke Darktable 2.6.3 biara na nkwado maka igwefoto ndị ọzọ | Site na Linux
Ọhụrụ nke Darktable 2.6.3 biara na nkwado maka igwefoto ndị ọzọ
Emeputara ohuru ohuru nke Darktable 2.6.3 Ọ na-abịa site na njirimara ole na ole, ndozi ahụhụ, na nke kachasị na nkwado maka igwefoto ndị ọzọ. Maka ndị na-amaghị Darktable kwesịrị ịma nke ahụ nke a bu software edezi n’elu ikpo okwu nke ọkachamara na nhazi foto "raw", ya bụ, data sitere na igwefoto igwefoto.
Ọ nwere ọdịiche nke ịbụ onye na-enweghị mbibiN'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dịghị agbanwe faịlụ ọ na-arụ na ya ebe ọ na-ejikwa usoro mgbanwe iji tinye na faịlụ raw na Darktable na-enye ohere ka ebupụ nsonaazụ ya, n'ụdị onyonyo a na-ahụkarị.
Ọchịchịrị Na-akwado na-arụ ọrụ na ihe oyiyi RAW ma na-enye nnukwu nhọrọ moduls ịrụ ọrụ dị iche iche na nhazi foto.
Na mgbakwunye, ngwa ahụ na-enye ohere nyocha anya site na onyonyo ndị dị adị ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, rụọ mmezi mgbapụta na arụmọrụ mmelite mma, ma na-echekwa onyonyo mbụ na akụkọ ihe mere eme niile. ya na ya.
A na-ekesa koodu oru ngo n'okpuru ikikere GPLv3.
1 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Darktable 2.6.3?
2 Etu esi etinye Darktable 2.6.3 na Linux?
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Darktable 2.6.3?
Versiondị ọhụụ a nke Darktable bụ isi mbipute nke na-agbakwunye nkwado maka ngwaọrụ ndị ọzọ, ọ bụ ezie na ọ na-abịa dozie ụfọdụ njehie nke ngwa na karịsịa makaiji gbanyụọ egwuregwu nke ndị otu mmepe jikọtara ọnụ ka ngwa ncheta Daybọchị Eprel ndị nzuzu.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị nwere echiche ahụ dịka ihe mbụ, na-atọ ụtọ ma karịa ihe ọ bụla. Ọtụtụ ndị ọrụ ndị ọzọ na-enye nsogbu ya mere ha alaghị azụ igosipụta afọ ojuju ha na otu ahụ site n’igosipụta enweghị ọrụ aka ha.
Ọ bụ ya mere na ụdị nke ngwa a Egwuregwu a nwere nkwarụ site na ndabara, ọ bụ ezie na egwuregwu ahụ ka dị n'ime Darktable dị ka ndị mmepe tinye nhọrọ iji gbanye na / ma ọ bụ gbanyụọ egwuregwu ahụ.
Mgbanwe ọzọ dị na ngwaọrụ sistemụ, ebe ọ bụ na etinyere mpaghara modul 17 mm dị ka nke ndabara, yana mgbakwunye nke nkwado iji gbanyụọ ntọala ahụ wee gbachapụ.
Maka akụkụ nke nkwado agbakwunyere, anyị nwere ike ịchọta:
Fujifilm X-T30 (abịakọrọ)
Leica C (pdị 112) (4: 3)
Leica Q (Pịnye 116) (dng)
Leica SL (Pịnye 601) (dng)
Leica V-LUX (pdị 114) (3: 2, 4: 3, 16: 9, 1: 1)
Panasonic DMC-TX1 (3: 2) Nyocha
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ntọhapụ ọhụrụ a, ị nwere ike ịkpọtụrụ njikọ na-esonụ.
Etu esi etinye Darktable 2.6.3 na Linux?
Imirikiti nkesa nwere ngwa ahụ na ebe nchekwa ha ya mere n'ime ụbọchị ole na ole ngwugwu a ga-erute ha.
Offọdụ n'ime ha enweela mmelite ọhụrụ a, yabụ ịwụnye ya ha gha agha otu n’ime iwu ndia.
Ndị ọrụ nke Debian, Ubuntu, Linux Mint ma ọ bụ ihe ọ bụla emepụtama ọ bụ nke ndị a, ha ga-pịnye:
Maka ndị ji ya Fedora ma ọ bụ nkesa ọ bụla sitere na ya, iwu nke ha kwesiri iji bu:
Ọ bụrụ ha ndị ọrụ nke ụdị ọ bụla nke openSUSE Nwere ike imelite ngwa na enyemaka nke YaST ma ọ bụ site na ọnụ, dị nnọọ pịnye:
Ndị ọrụ nke Arch Linux, Manjaro, Antergos, Arch Labs na ihe ndi ozo nke Arch Linux wụnye ngwa na:
Maka ndị ji ya Gentoo ma ọ bụ Funtoo, wụnye ngwa na:
N'ikpeazụ, n'ihi na RHEL, Scientific Linux, CentOS ma ọ bụ ndị ọrụ nrụpụta ha ga pịnye ihe ndị a:
Finalmente ma ọ bụrụ na mmelite erubeghị na nkesa gị, ị nwere ike ikpokọta ngwa ahụ dị ka ndị a. Mbụ anyị nwetara koodu isi na:
Anyị na-aga n'ihu ikpokọta ma wụnye ya na:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ọhụrụ nke Darktable 2.6.3 biara na nkwado maka igwefoto ndị ọzọ
Versiondị ọhụrụ nke Cloud Hypervisor 0.3 abịarutere, oghere mmeghe VMM
Electron 7.0 dabere na Chromium 78, Node.js 12.8.1 na ndị ọzọ na-abata